Mon Monk’s revealation about Bama’s history and language
Release of UOL 2012 Exam Results
That’s Our Bamar (30) ပုဂံ နေ၀င်ချိန်
An Ultimatum for Iran Our options againstanuclear-armed Iran are bad. Doing nothing is worse By Charles Krauthammer
Right To Life Court Battle Over Muslim Man
Posted: 24 Aug 2012 09:43 AM PDT
Heng Heng Tomyam Mee, Bukit Mertajam – Seberang Perai really hasalot of good food. Raja Uda, Butterworth has good tomyam mee, but at Bukit Mertajam, there too, hasagood tomyam mee stall named Heng Heng.
Heng Heng does not only sells tomyam noodle, but they do sell pork noodle, as well as seafood porridge. But the famous one is the pork noodle and tomyam noodle.
There's quiteanumber of ingredient for you to pick for your serving. The tomyam is very thick, sour and spicyabit but it's good. Try it with some minced meat, mantis prawn and perhaps some abalone slices, it will be nice as it's me and my girlfriend's favourite. One thing that it's not so 'awesome' is the price. The bowl that I ate was RM10. Pretty expensive right? Anyway, it'sagood one. Do check it out.
Heng Heng Tomyam Mee
Lebuh Nangka 1,
GPS: E100 26.634, N5 21.872
Posted: 24 Aug 2012 09:45 AM PDT
Posted: 24 Aug 2012 09:02 AM PDT
Sunset: George Town City Centre – My latest sunset watching place is in the heart of George Town. Well, I'd call it the city centre of George Town. But the exact place is the carpark of 1st Avenue Shopping Mall. Haha. You can getagood view of sunset across the magnificent Penang Hill.
I went to try my luck for sunset watching few days ago but sadly, not so good, it's kinda cloudy. Nevertheless, it was nice that I've foundanew place for sunset watching. Awkward location, but pretty cool.
Posted: 24 Aug 2012 10:15 AM PDT
"AMK Selangor begitu kesal kerana Donald Lim yang juga Timbalan Menteri Kewangan sepatutnya bertindak lebih waras dan tidak biadap dengan memainkan sentimen agama yang sempit semata-mata terdesak untuk merebut kembali Selangor yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat ketika ini.
"Justeru, kenyataan Donald Lim dilihat lebih kepada kenyataan seorang pemimpin parti yang ketinggalan zaman dan terdesak, serta tidak berdaya lagi untuk bersaing secara lebih kompetitif dalam melaksanakan demokrasi dengan lebih adil.
"Tindakan menghina Islam secara terang-terangan ini mencerminkan kebodohan diri sendiri yang akhirnya akan merugikan MCA sendiri", katanya dalam satu kenyataan akhbar hari ini.
AMK Selangor katanya, menyelar sikap dwi standard Umno yang bersikap tidak konsisten dalam isu menjaga kedaulatan agama Islam ini apabila dengan lantang menyerang DAP tetapi takut kepada MCA, hingga mencetuskan tanda tanya siapa sebenarnya ' abang besar' dalam BN.
"Oleh yang demikian usahlah Umno bermimpi untuk merampas kembali Selangor kalau sikap mereka begitu mengelirukan dalam isu ini. Kebaculan Umno begitu terserlah dan layaklah mereka dipinggirkan dari terus mentadbir negeri Selangor ini. Umno langsung tidak menghormati Sultan Selangor sebagai ketua rasmi agama Islam di negeri ini", kata beliau.
"AMK Selangor menolak politik sentimen dan kebencian dan yakin bahawa rakyat kini adalah mereka yang matang serta memiliki pengetahuan di hujung jari. Maklumat adalah satu keistimewaan bagi rakyat, dan mereka akan pantas mengetahui politik mainan MCA/BN ini adalah politik murahan yang dimainkan oleh mereka yang mempunyai pemikiran kurang bijak," tambah Asmizam. -FMT
Ko Htoon Nooth Credit to -> Ven Ravika
AS A REBUTTAL to Dae Oh sayadaw's wrong ideas
၁။ ဗမာတွေက ပုဂံကို ပျူတို့လက်ထဲက မရခင်မှာ ထေရဝါဒရှိခဲ့ဟန် တူပါတယ်။ ဗမာလူမျိုးများက တရုတ်နိုင်ငံကနေ မြေပြန့်ကို ဆင်းလာတယ့်အခါမှာ သမိတိယဂိုဏ်းအယူကို ယူလာကြပါတယ်။ ဗမာတွေက ပျူတွေကို လွှမ်းမိုးလာတာနဲ့အမျှ သမတိယ (သမထီး)ဂိုဏ်းလည်း အားသာလာခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ကျော်မှာ ထေရဝါဒ ပျောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ ခေတ်သစ်သမိုင်းဆရာအချို့က အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းရတယ့် ပန်းဦးဆက်ဓလေ့ကို ရှောင်လိုတာနဲ့ ဒါတွေ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ထွင်ပြီး ရေးလာကြပါတယ်။ ဒီပန်းဦးဆက်ဓလေ့သာ မရှိယင်၊ အရည်းကြီး (အရိယာကြီး)ဂိုဏ်းသာ မရှိခဲ့ယင် ရှင်အရဟံက ပုဂံကို ကြွစရာမလိုပါ။ အနော်ရထာကလည်း လုပ်ကြံခံရစရာမရှိပါ။ သထုံမှာ အနော်ရထာတည်ခဲ့တယ့် ရန်အောင်မြင်စေတီလည်း ရှိနေမှမဟုတ်ပါ။ တွံတေးမှာ အနော်ရထာလုပ်ခဲ့တယ့် အုတ်ခွက်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါ။
၂။ ပျူစစ်ယင် မြန်မာလို့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ပျူက အရင်ပါ။ ဒီစကားကို ပျူလူမျိုးများသာ ကြားကြယင် ဘယ်လိုဝေဖန်မလဲ။ ပုဂံခေတ်မှာ ဗမာတွေရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ဟာ ပျူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျူက ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ယင် ပျူအက္ခရာကို ဘယ်ယူမလဲ။ ပျူက အနွယ်တူလို့ ပျူကို ချီးမြှောက်မယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ အခု ကချင်က မြန်မာနဲ့ အမျိုးအနွယ်နီးစပ်ပါတယ်။ ဝက မွန်နဲ့ အမျိုးအနွယ်နီးစပ်ပါတယ်။ ကချင်ကို တီးဖို့အတွက် ဝက ဘာပဲလုပ်လုပ် လွှတ်ထားတယ်မဟုတ်လား။ ဒီအတိုင်းပဲ။ ပျူနဲ့ ပြိုင်နေရတယ့်အချိန်မှာ မွန်တွေကို မြှောက်စားထားမှာပေါ့။ မွန်အက္ခရာကိုပဲ ယူတော့မပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း ပုဂံစာပေပထမခေတ်မှာ ဗမာကျောက်စာထက် မွန်ကျောက်စာက ပိုများနေခဲ့တာပေါ့။ အခု ပျူက မရှိတော့ပြီ။ ပျူက မရှိတော့ ရှိသမျှ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို ပျူပိုင်လုပ်ပြီး ပျူစစ်ယင် မြန်မာလို့ ပြော၊ မွန်တွေကို နှိမ်ကြ ဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်မလား။ ဒါက သမိုင်းသင်္ခါရ လူ့အတ္တတွေပါ။
၃။ ရခိုင်ကျတော့ ဗမာတွေထက် ယဉ်ကျေးမှု စောကြပါတယ်။ သီးသန့်နေထိုင်နေကြတယ့် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ အလောင်းစည်သူမင်းခေတ်အထိ လောင်းရိပ်ကင်းကင်းနဲ့ နေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီနောက်မှာမှ ရခိုင်အသိမ်းခံရတာပါ။ ရခိုင်ကို မသိမ်းခင်ကတည်းက ဗမာစာ ရှိခဲ့ပြီ။ အဲဒီမတိုင်ခင်က ရခိုင်စာဟာ ဒေဝနာဂရီအက္ခရာကို အခြေခံတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ လက်ရှိအက္ခရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထားဝယ်တွေ၊ ရခိုင်တွေက ဗမာစကားကို ပြောကြပေမယ့် သူတို့ဟာ ဗမာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူတို့ သိကြပါတယ်။ ဥပမာ ထားဝယ်လူမျိုးတစ်ဦးဟာ ဗမာတွေကို ဂံလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပုဂံသားလို့ ဆိုလိုရင်းပါ။ ထားဝယ်ဒေသဟာ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းင်္မြို့ဖြစ်တယ်။ ပုဂံလက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်း (၃၀၀)နီးပါး နေခဲ့ရတယ်။ ဗမာစကားပဲ ပြောကြတော့လို့ ဗမာတွေနဲ့ နီးစပ်သွားတာပါ။ အခု ကြည့်ပါ။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ့ဗျား။ လွန်ခဲ့တယ့် နှစ်(၂၀၀)လောက်က ဗမာတွေ မရှိဘူး။ အညာက လူတွေ ပထမဆုံး အခြေချတယ့်နေရာဟာ ဗိုလ်တထောင်တစ်ဝိုက်မှာပါ။ အခု ရန်ကုန်သားတွေက မွန်တွေပါလို့ မပြောကြတော့ပြီ။ ရန်ကုန်ပြောယင် ရှည်သေးတယ်။ ကျိုက္ခမီမြို့ကို ကြည့်ပါ။ သံဖြူဇရပ်က (၁၅)မိုင်လောက် ဝေးပါတယ်။ ဘေးနားမှာ မွန်ရွာတွေပဲ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျိုက္ခမီရွာသားတွေက မွန်စကားမပြောကြတော့ပါ။ ဗမာစကားပဲ ပြောကြပါတယ်။ ဗမာလူမျိုးများလို့ မိမိတို့ကိုမိမိ ခံယူကြပါတယ်။ ဒါတွေက ရုံးသုံးဘာသာစကားက ဗမာဖြစ်လို့ ဒီလို ဖြစ်ရတာပါ။
အကြံပြုချင်တာက လက်ရှိပထဝီဝင်ကို ကြည့်ပြီး မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်မပါဖို့ပါပဲ။ )
He is dreaming that Dae Oh is an ocean. Burmese got Buddhism from Mon through Shin Arahan and got Tripetaka after conquering Thaton. Burmese language is more similar to Thai Mon than even the Myanmar Mons. From Rakhine, Bamas got the Maha Myatmuni only. Rakhine history wrote about burning of Rakhine monasteries and killing ofalot of Rakhine monks by invading Bama Kings only. I hope there isawisdom of moonlight under the Dae Oh.
‎"မှန်ပါတယ်"သမိုင်းကိုလိမ်လို့ မရပါဘူးသင်ဖတ်ပြီးရင် ဆရာတော်အတွက်ကျေးဇူးပြု၍
like လုပ်ပေးပါ :-)
Posted: 24 Aug 2012 08:32 AM PDT
Beliau enggan dikaitkan dengan Umi Hafilda yang sebelum ini dikatakan pernah memfitnah selebriti yang terkenal dengan ungkapan 'Amboi, Amboi, Amboi' melalui catatan surat arwah bapa mereka bertarikh 18 Oktober 1998.
"Jangan tanya apa-apa pasal Ummi Hafilda… Saya sudah tegaskan sebelum ini, saya tak ada sesiapa lagi. Saya hanya ada (Mohamed) Azmin dan Azman. Mereka itu saja darah daging saya," katanya kepada Keadilan Daily, hari ini.
"Empat hari berturut-turut, saya beri komen yang boleh menggemparkan dunia. Saya akan teruskan dan kita lihat apa yang akan terjadi nanti," katanya yang marah apabila ibunya diperalat untuk kepentingan Umno.
"Azmin adalah abang saya selama-lamanya. Beliau adalah 'great leader' (pemimpin yang hebat). Saya sokong perjuangan Azmin untuk KEADILAN," katanya. -KD
Posted: 24 Aug 2012 05:56 AM PDT
Been more than4months since I updated this blog. And so, here I am… with an update of my results. This time I am pretty satisfied with my results.
And justamonth before this happened, I was out with my friend to Kinokuniya. He told me about this book called – The Book of Answers.
And how are you going to use the book? As I remembered.
Hold the book with the front cover on your left palm.
Right hand onto the back of the book.
Think about your (closed ended) question and concentrate on it for 10-15seconds
Run your fingers along the corners of the book.
Flip open the book when you feel its right.
So I asked the book: Will I pass my exams?
And the book replied:
Okay, that was SO vague. My friend asked the book if he should continue with interior design after his army.
And the book reply was:
Again, that is suchavague answer.
So I told my close pals about it and all told me to chill and not to read too much into it. There isn't much to worry about afterall by then, the results by should be keyed into the system waiting to be released.
THE BIG DAY ARRIVED. I had tuition that day. SMS-es keep flowing in asking me about my results. I didnt manage to check till about6in the evening. And I think I was too anxious of my results till I actually typed in my 2010 candidate number instead of my 2012 one. Of course, I didn't manage to log in and started suspecting if the website was overwhelmed by other students trying to check their results as well. But somehow during that brief seconds of suspecting, I kept staring at my entry proof – this candidate number doesn't look anywhere near the one I just hadafew months ago. That was when I realised I had been typing in the wrong number all along.
And the big moment came, I PASSED THREE OUT OF THE FOUR MODULES I TOOK!
AND YES I FUCKING PASSED ECONS THIS TIME! I was mentally screaming and my parents came home! HAHA
Introduction to Economics525 50
Principles of Sociology 27 23 21
Principles of Accounting 26 36 -
Statistics 1 (Half Unit) 30 55 -
Mathematics 1 (Half Unit) 20 40 -
Management Science Methods 38
Information Systems & Organisations 44
Its confirmed. Sociology is just not my thing. You see! The more attempts I took, the lower the marks! But I am DAMNED happy with my Econs especially. The blood Vanessa vomited is all worth it now. HAHAH. Sorry babe!
And with that I decided to splurge… onawatch that I have been eyeing for my birthday but didn't manage to.
and for now, Jacqueline isahappy girl. =)))
Posted: 24 Aug 2012 04:33 AM PDT
That's Our Bamar (30) by Thant Sin Phyoe on Friday, August 24, 2012 at 7:08am ·
သမိုင်း ထဲက မြန်မာ ပြည်သား (၃၀) ကျောက်စာ ထဲက ပုဂံ (၁၂) ပုဂံ နေ၀င်ချိန်
ပုဂံ နေ၀င်ချိန် ဟာ တရုတ်ပ္လိယ် နန်းစံနှစ် တစ်ဝက် ကျိုးလုလု ၁၂၇၁ က စတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ ၁၂၇၁ မှာ တရုတ် (မွန်ဂို) ဧကရာဇ် နဲ့ အမိန့်နဲ့ ယူနန်ပြည်နယ်က သံတမန်တွေ ပုဂံကို ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာ ဆက်သဖို့ တောင်းဆို (အမိန့်ပေး?) ခဲ့ကြတယ်။ ဘုရင်နဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးပဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြလို့ အကြာကြီး အချိန်ဆွဲ ထားလိုက်တယ်။ မစောင့်နိုင် တော့လို့ ပြန်တော့မယ် ဆိုမှ စကားချိုချို ပြောပြီး မာပါစေကြောင်း သာစေ ကြောင်းနဲ့ လမ်းခရီး အဆင်ပြေပါစေ ဘာညာ လုပ်ပြီး သွားတော့နော် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘာအကြောင်းနဲ့များ အင်မတန်ဝေးလံတဲ့ ဘေဂျင်း ကနေ ပုဂံ ကို လာရန်စ ရ သလဲ လို့မေးရင် ဖြေဖို့ အတော်ခက်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုက ပုဂံ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မြောက်ဖက် နယ်စပ် က တရုတ်သွေး နှော တဲ့ လူမျိုးစု တွေက မြန်မာတွေရဲ့ သြဇာ အာဏာ သူတို့နယ် ကိုပျံ့ နှံ့ လာတာကို မကြိုက်တဲ့ အတွက် တားနိုင်ရင် တားပေးဖို့ တရုတ်ကို တောင်းပန်လေ့ ရှိတယ်လို့ ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းများက ဆိုပါတယ်။
၁၂၇၂ မှာ မြောက်ပိုင်းဒေသ များကို ပုဂံတပ်များ သွားရောက် တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်း ခဲ့တယ်။ မဆီ မဆိုင် တရုတ် ကိုသွားတိုင်တဲ့ ကောင်တွေ ဆိုတဲ့ အငြိုး အတေးလည်း ပါမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်နှစ် အကြာ ၁၂၇၃ ခုနှစ် မတ်လ (၃) ရက်နေ့မှာ တရုတ် ဧကရာဇ် ထပ်မံစေလွှတ်လိုက်တဲ့ သံကြီး တမန်ကြီး တစ်ဦးနဲ့ သံအဖွဲ့ဝင် သုံးဦး ပုဂံနေပြည်တော် ကိုထပ်ရောက်လာပါတယ်။ ပြဿနာ က ဒီသံတမန် အဖွဲ့ ဟာ တရုတ်ပြည်ကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မရောက်တော့တာပါပဲ။ မှန်နန်းရာဇ၀င် က တရုတ်သံ အဖွဲ့ ကို နရသီဟ ပတေ့ မင်းကြီး အမိန့်နဲ့ သုတ်သင် လိုက်တယ် လို့ရေးတယ်။ မင်းအဆက်ဆက် တို့သည် သံတမန် ကို သတ်ရိုး ထုံးစံ မရှိ ဆိုတဲ့ စကား အရ တရုတ်ပ္လိယ် ကမသတ်ပေမဲ့ ပုဂံ နဲ့ ဘေဂျင်းကြား ဓါးတောင်ကို ကျော်ပြီး မီးပင်လယ် ဖြတ်ရတဲ့ အဲဒီခေတ်က လမ်းခရီး မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး နဲ့ အလွယ်တကူ သေနိုင်တာကို စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီသံတမန်တွေ ပြန်ရောက် မလာတာကို အကြောင်းပြပြီး ယူနန် ဘုရင်ခံက ဘေဂျင်း ဧကရာဇ် ကို ၁၂၇၅ ခုနှစ်မှာ ပုဂံ ကိုတိုက်ဖို့ စစ်အင်အားတောင်းတယ်။ ဒီအထိ တရုတ် ဧကရာဇ် ဖက်က ပုဂံကို ကျူးကျော်ဖို့ စဉ်းစားသေးဟန် မတူပါ။ ဘာမှ အရေးယူဆောင်ရွက်တာ ကိုမတွေ့ရပါ။ ကံဆိုးချင်တော့ ၁၂၇၇ ခုနှစ် ဧပြီလ မှာ တရုတ်နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ တပိန်မြစ်ဒေသ က ကန်ငယ်စား ကို ပုဂံတပ်များက သွားရောက် တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းခဲ့တယ်။ ဒီမှာပဲ တရုတ်ဖက် က အကြောင်းပြချက် ကောင်းကောင်း ရသွားပြီး သံတမန်တွေ ကို နှိပ်ကွပ်၊ သတ်ဖြတ်တဲ့ ကိစ္စ။ သူ့ဘက်တော်သား နဲ့ ဆွေမကင်း မျိုးမကင်း တွေကို တိုက်ခိုက် ညှင်းပန်းတဲ့ ကိစ္စ တွေ အကုန်ပေါင်းပြီး ပုဂံကို တိုက်စေ ဆိုတဲ့ အမိန့် ကို ဧကရာဇ် ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီ အမိန့်ဟာ တလီဒေသ မှာ တပ်စွဲနေတဲ့ မွန်ဂို ဗိုလ်ချုပ် ဟုတု (Hu tu) ထံကို ရောက်လာလို့ တရုတ်-ပုဂံ စစ်ပွဲ စပါတော့တယ်။ မြစ်တစ်ခု ရဲ့ ကမ်း နဘေး တိုက်ပွဲငယ် တစ်ခု preliminary battle မှာ ပုဂံတပ်တွေ အရေးနိမ့် ခဲ့တယ်။ အခုထိ ဒီတိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ geographical location အတိအကျ ကို မသိကြရသေးပါ။ မာကို ပိုလို က ဒီတိုက်ပွဲကို ငဆောင်ချမ်း တိုက်ပွဲ လို့ ရမ်းရေး တာနဲ့ သူ့နောက်လိုက်ပြီး Harvey တို့အုပ်စု ကလည်း ငဆောင်ချမ်း လိုက်လုပ်ကြပါတယ်။ ၁၂၇၇ နှစ်ကုန်ခါနီး မွန်ဂိုတပ် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ရောက် လာပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ မှ ပုဂံ ရဲ့ မြောက်ဖက် အကျဆုံး အခိုင် အခံ့ တည်ဆောက်ထား တဲ့ ငဆောင်ချမ် ခံတပ်မှာ မွန်ဂို- ပုဂံ တပ်တွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ဟန် တူတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းကို ဖော်ပြ ထားတာကတော့ မင်းနန်သူ စောလှဝန်း ကျောက်စာပါ။
သကရစ် ၆၄၀ (27 March 1279)။ ပိသျက်နှစ်။ ဤန်္တ ပစြာ မည်သော အမတ်ကြီသည်။ မ္လတ်ကြီ မဟာ ကဿပ အရပ် ထေရက္လောင် မဟိယ် ရကာ၊ ထေရက္လောင် ဖ္လစ်စိမ် ဟုရုယ် ရျင်ဧအ်၊ က္လောင်ကမပ္လုဥိ၊ တန်တိုင် ပ္လုဧအ်၊ တန်တိုင်လေ မပြီခယ်၊ ဤ န်္တ ပစြာလေ ငါဆောင်ချမ် မြိုဝ် နိယ်ရလိယ်၏ ပြည်တယ် ပျက်စိ သ ဖ္လစ်ခယ် ဧအ်၊ ၊ သကရစ် ၆၅၅ ခု သရ၀န်နှာစ် တန်ဆောင်မှုန် လ္ဆန် ၅ ရျက် ၅ နိယ် (4 October 1293) လျှင် အမတ်ကြီ ဤ န်္တ ပစြာ ပ္လုရုယ် မပြီသ၊ ထေရ က္လောင်ကိုဝ်၊ ဤ န်္တ ပစြာ သ္မီနှင်၊ သ္မက် အမတ် ပုညာ ပ္လုဧအ်၊ တန်တိုင်လေဆင် ဧအ်၊ ကုလာ က္လောင်၊ က္လောင်ဥိ စလစ် ဥိထွက်ပ္လုဧအ်၊ ဆိယ်ဝါ အလွန် တကယ် ဆန်ကြယ်လျင် ရိယ်ဧအ်။။။
ဒီကျောက်စာ အရ ၁၂၇၉ ခုနှစ်မှာ အမတ် က္ကုန္တပစ္စယာ ဟာ မဟာ ကဿပ အရပ်မှာ ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်း တော့ ကျောင်းမပြောနဲ့ အုတ်တံတိုင်း တောင် ခပ်လို့ မပြီးသေးခင် ပြည်ရွာ ပျက်စီးလုနီးပါး အခြေ အနေဆိုး ကြောင့် ငဆောင်ချမ်း အရပ် ကိုသွားရပါသတဲ့။ ဟိုမှာပဲ သေကျန်ရစ်လို့ သူ့ကောင်းမှု ကို သူ့ သမီးနဲ့ သမက်က ဆက်လုပ်လို့ ၁၂၉၃ မှာ ကျောင်းပြီးစီးလို့ ရေစက်ချ လှူဒါန်းရတယ် လို့ဆိုထားပါတယ်။
မွန်ဂို ကျူးကျော် စစ်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ အရေး အပါဆုံး ကျောက်စာ ကတော့ ပုဂံ မင်္ဂလာ စေတီက ဒိသာ ပြာမုခ် ကျောက်စာ ပါပဲ။ ကျောက်စာပါ အဓိက အချက် အလက်တွေကို ရှင်းလင်းအောင် ပြောရရင်-
၁၂၈၇ မှာ ပုဂံ ထိ တရုတ်တပ် ရောက်လာတာမို့ ပြည်အနောက်ဖက် လှည်ကျက အထိ ဘုရင် တိမ်းရှောင်ထွက် ပြေးတယ်။
အနန္တ ပစ္စည်း နဲ့ မဟာဗိုလ် ဆိုတဲ့ အမတ်ကြီး နှစ်ပါး မင်းကြီး အနားမှာ အပါးတော်မြဲ အဖြစ် ပါရှိတယ်။
ရန်သူ တရုတ် ဘာအလို ရှိသလဲ ဆိုတာ သိဖို့ အတွက် ရှင်ဒီသာ ပါမောက် ကိုပင့်ပြီး တရုတ်ကို သံတမန် အနေနဲ့ လွှတ်ဖို့ အဆိုပါ အမတ်ကြီး နှစ်ပါး ကပဲ တရုတ်ပ္လိယ် မင်းကို အကြံပေးတယ်။
မင်းဆိုတာ တမန်ကိုဖမ်းပြီး ချုပ်နှောင်တယ်လို့ မလုပ် စဖူး လို့ တရုတ်ပ္လိယ် က ရှင်ဒီသာ ပါမောက် ကို အားပေး (မြှောက်ပေး) ပြီး တေတု လို့ အဲဒီ အချိန်က ခေါ်တဲ့ တရုတ်ရွှေမြို့ တော် ဘေဂျင်း အထိ ရောက်အောင် သွားစေတယ်။ တကယ်လို့ သူသာ တရုတ်သံတွေကို သတ်မိန့် ပေးထားခဲ့ ရိုးမှန်ရင် ဘေဂျင်း ကို သံတမန် လွှတ်ဝံ့ ပါ့ မလား။ ဒါကြောင့်မို့  ဘုန်းကြီး ကိုရွေးလွှတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁၂၈၇ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ရှင်ဒီသာ ပါမောက္ခ ငြိမ်းချမ်းရေး သံ အဖြစ် ခရီးစထွက်တယ်။ ယူနန်ပြည်နယ် ယဆည် (Yachi) မှာ ၀ါဆိုတယ်။ မန်ကျူ ဧကရာဇ် စံမြန်းရာ တယ်တု ကို ၁၂၈၇ ဒီဇင်ဘာ မှာရောက်သွား ခဲ့တယ်။
တိုင်းပြည် မှာ ပြည်သူ ပြည်သား မရှိရင် ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မရတော့။ ဒါကြောင့် တရုတ် စစ်သည် သူရဲ တွေကို ပြန်ဆုတ်ခိုင်း။ စစ်ဒဏ်ကြောင့် ထွက်ပြေးနေတဲ့ လူတွေကို ပြန်ခေါ်။ ကောက်ပဲ သီးနှံ စိုက်ခိုင်းပြီး ကောက်ရိတ်သိမ်း ချိန် ကျမှ အခွန် လာသိမ်းလှဲ့ ဆိုတဲ့ ဒီသာ ပါမောက္ခ ရဲ့ စကားကို မန်ကျူ ဧကရာဇ် ကသိပ်ကြိုက်ခဲ့တယ်။ (ကြိုက်မှာပေါ့။ သူ့ဖက်က အသာချည်းပဲကိုး)
ပုဂံ ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ တရုတ်တပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ် အဖြစ် သုသုတ္တကိ (Hsueh-hsueh-ti-chin) ဦးဆောင်ပြီး စစ်သူရဲ နှစ်သောင်း ပါလာတယ်။
ပုဂံမှာ သာသနာပြုဖို့ အတွက် မဟာ ထေရ ပုည ဓမ္မိက နဲ့ သိရိ ဓမ္မိ တို့ဦးစီးပြီး ကျောင်းပေါင်း ၇၀ က တရုတ် ရဟန်း သံဃာ တွေပါလာတယ်။ ပုဂံ ရောက်တော့ ရဟန်း။ လူ။ မင်း တစ်ယောက် မှ မကျန်အောင် အကုန်လုံး ထွက်ပြေးနေကြလို့ လူမရှိတဲ့ နေရာမှာ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိ၊ စေတီ၊ ပုထိုး၊ ကျောင်း တွေ တွေ့လို့ ပုဂံ ကို သာသနာ ပြုစရာ မလိုကြောင်း ရောက်မှပဲ သိကြပုံပေါ်တယ်။ ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ်ပြန်ချင်လို့ ဆူဆူ ပူပူ လုပ်ကြတာ ကိုလည်း မန်ကျူ ဧကရာဇ် ထည့်စဉ်းစား ပုံရတယ်။
အဲသလိုနဲ့ တရုတ်တပ် တွေပြန်ဆုတ် သွားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်သြဇာ ခိုင်စေဖို့ မင်းသား ရဲစိန် တိမူ (Ye-sin-timus) ကို စေလွှတ်ပြီး ပုဂံ မင်းသစ် ကို သူ့စိတ်ကြိုက်တင်စေတယ်။ ရွှေနန်းသျှင် ကို ပုဂံမင်းသစ် အဖြစ် 30 May 1289 မှာနန်းတင်ခဲ့ တယ်။ ရွှေနန်းသျှင် က သူ့သား သိင်္ဃ ပတိ ကို တရုတ် ဧကရာဇ် ဆီလွှတ်တယ်။ ပညာသင် လွှတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဓါးစာခံ လွှတ်ရတာ ဖြစ်ဖို့ အကြောင်း ပိုများလိမ့်မယ်။ သို့သော် သူ့မှာ သြဇာ မရှိတော့။ မွန်ဂို အားကိုး နဲ့ နန်းရတဲ့ မင်းကို ပြည်သူ က မကြည်လင် ကြလို့ ၁၂၉၇ မှာ သူရော သူ့သား ဘေဂျင်း ပြန် သိင်္ဃ ပတိ ရော အသတ်ခံရတယ်။ ကုမာရ ကဿပ ခေါ် တက်တ၀်မူ မင်းကြီ ဆိုတဲ့ သူကို နန်းတင်တယ်။ ဘာမှ မကြာပဲ နန်းကျ ပြန်တယ်။ မင်လုလင် ခေါ် စောနှစ် နန်းတက်ပြန် တယ်။
ဒီလို တစ်ဗိုလ်ကျ၊ တစ်ဗိုလ်တက် လုပ်နေတဲ့ ပုဂံ နန်းဟာ အဲဒီ အချိန်မှာ ဘာသြဇာ အာဏာ မှ မရှိတော့ပဲ နာမည်ခံ ဘုရင် ဖြစ်နေရှာပါပြီ။ တကဲ့ အာဏာ က ရှမ်းညီနောင်သုံးပါး ခေါ် မြင်စိုင်းမင်း အသင်္ခယာ၊ မက္ခယာ မင်း ရာဇ သင်္ကြံနဲ့ ပင်လယ် မင်း သီဟသူ တို့ရဲ့ လက်ထဲ ရောက်နှင့် နေပါပြီ။ ရွှေနန်းသျှင် လက်ထက် ကတည်းက ပုဂံ နိုင်ငံတော် ကို ရှမ်းညီနောင် သုံးဦး ခွဲဝေ အုပ်စိုး ကြပြီ လိုဆိုရပါမယ်။ ခရစ်နှစ် ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ မွန်ဂို တပ်တွေချီတက်လာပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပုဂံ ကို မလာပဲ တကယ့် အာဏာ တည်ရာ မြင်စိုင်း ကိုတန်းသွားကြပါတယ်။ အမျိုးသားရေး နိုးကြားအောင် လှုံ့ဆော် နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရှမ်းညီနောင် သုံးဦး ကြောင့် မွန်ဂို တွေထင်တိုင်း မပေါက်။ ဒါပေမဲ့ ခံစစ် သက်သက်သာ တတ်နိုင်ရှာတဲ့ ဗမာတွေဟာ မွန်ဂို ကို အားတင်း တွန်းလှန်ရင်း နွေရာသီ ရောက်လာပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ရဲ့  မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လုအောင် ပူလှ တဲ့နွေနေ အပူဒဏ် ကိုကျောကော့အောင် ခံရတဲ့ မွန်ဂိုတပ် များ ဟာစိတ်ဓါတ် အကြီး အကျယ် ကျဆင်း လာပါ တော့တယ်။ တစ်ဖက် ကလည်း တပ်မှူးများ ကို ရွှေ-ငွေ များနဲ့ လာဘ်ထိုး စည်းရုံး တဲ့ အတွက် ၁၃၀၃ ခုနှစ် ဧပြီ ၄ ရက်နေ့ မှာ ကျဲန်မိယင် (Cheng Mien) လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ပုဂံ နိုင်ငံတော် ကနေ တပ်ဖြုတ်ပြီး လက်အောက်ခံ နိုင်ငံ အဖြစ်က အပြီး ဖျက်သိမ်းပြီး မွန်ဂို တပ်တွေ ပြန်သွားကြတယ်။ ဒီမှာပဲ မွန်ဂို တရုတ် ရန်ကို အပြီးတိုင် တွန်းလှန် နှိမ်နင်း နိုင်သော ဘုန်းလက်ရုံးရှင် ရှမ်းညီ နောင် သုံးဦး ဆိုပြီး ကျောက်စာတွေ ထိုးပြီး မဟားတရား ကြွားပါတော့တယ်။ ဘာဏု ရာဇာ ဒေါင်းဖန်လ်ဝါ နဲ့  ရွှေငွေ လက်ဆောင် ပဏာ ကျေးဇူးကြောင့် ရန်သူတွေ ပြန်ဆုတ်ပါတယ် လို့တော့ ဘယ်ပြောလိမ့်မလဲနော်။ ။
သမိုင်းထဲက မြန်မာပြည်သား ဆောင်းပါးရှည်ကြီး ကိုဒီမှာပဲ ခဏ ရပ်နား ပါရစေ။ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖတ်ရှုခဲ့ကြသူ အပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်လျှက်-
Epigraphia Barmanica Vol. I, II and III
Than Tun Dr (1955) "History of Burma A.D. 1000-1300" BBHC, I, I, 39-57 and Rangoon University Annual Magazine.
သန်းထွန်း၊ ဒေါက်တာ၊ ပုဂံ ခေတ် နိုင်ငံရေး သမိုင်း။
သန်းထွန်း၊ ဒေါက်တာ၊ အသစ်မြင် မြန်မာ့ သမိုင်း။
သန်းထွန်း၊ ဒေါက်တာ၊ ခေတ်ဟောင်း မြန်မာ ရာဇ၀င်။
Posted: 24 Aug 2012 03:53 AM PDT
Either Israel is engaged in the most elaborate ruse since the Trojan Horse or it is on the cusp ofapre-emptive strike on Iran's nuclear facilities. What's alarming is not just Iran's increasing store of uranium or the growing sophistication of its rocketry. It's also the increasingly menacing annihilationist threats emanating from Iran's leaders. Israel's existence is "an insult to all humanity," says President Mahmoud Ahmadinejad. "Anyone who loves freedom and justice must strive for the annihilation of the Zionist regime." Explains the country's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, Israel is "a true cancer tumor on this region that should be cut off." Everyone wants to avoid military action, surely the Israelis above all. They can expectamassive counterattack from Iran, 50,000 rockets launched from Lebanon, Islamic jihad firing from Gaza, and worldwide terror against Jewish and Israeli targets, such as what happened last month in Bulgaria. Yet Israel will not sit idly by in the face of the most virulent genocidal threats since Nazi Germany. The result then was6million murdered Jews. There are6million living in Israel today.
Time is short. Last-ditch negotiations in Istanbul, Baghdad, and Moscow have failed abjectly. The Iranians are contemptuously playing with the process. The strategy is delay until they get the bomb. What to do? The sagest advice comes from Anthony Cordesman, military analyst at the Center for Strategic and International Studies, hardheaded realist, andabeliever that "multilateralism and soft power must still be the rule and not the exception." He may have found his exception. "There are times when the best way to prevent war is to clearly communicate that it is possible," he argues.
Today, the threat ofaU.S. attack is not taken seriously. Not by the region. Not by Iran. Not by the Israelis, who therefore increasingly feel forced to act before Israel's more limited munitions — far less powerful and effective than those in the U.S. arsenal — can no longer penetrate Iran's ever-hardening facilities.
1. Clear U.S. redlines.
It's time to end the ambiguity about American intentions. Establish real limits on negotiations — to convince Iran that the only alternative toadeal is preemptive strikes, and to convince Israel to stay its hand.
by Dean Nelson for the Telegraph, August 23 2012.
The tortured body of an 11 year old Christian boy has been found inatown in Punjab, Pakistan, days afterayoung Christian girl was arrested on blasphemy charges. Detectives in Faisalabad, around 60 miles from Lahore, said they were investigating whether accusations of blasphemy had also been made against the boy. Human rights campaigners condemned the killing of Samuel Yaqoob whose burned and tortured body body [sic] was discovered on Eid, the celebration which marks the end of the Islamic fasting month of Ramadan.
His lips and nose had been sliced off, his stomach removed and there was evidence that his legs had been mutilated too. The boy had been missing since Monday when he left his home in the town's Christian Colony to visitalocal market. His relatives identified his body fromadistinctive mark on his forehead. Yaquub was reported to be an orphan but in local newspaper reports his mother Asia Bibi was quoted denying he had been accused of blasphemy. "We neither received any phone call for ransom nor were we told that Samuel had committed blasphemy," she said.
Police said they were investigating whether blasphemy had been behind the attack on Samuel. His death comes just days after the arrest of Rimsha Masih, an eleven year old girl with Down's Syndrome, after Muslims in Islamabad accused her of burning pages from the Koran for cooking....Hat tip: Jihad Watch
Posted: 24 Aug 2012 05:30 AM PDT
Pengarah Propaganda SAMM, Edy Noor Reduan berkata, bukan omong kosong, namun dengan pelbagai isu dan skandal rasuah, penyelewengan serta salahguna kuasa, salahguna hari kemerdekaan dan termasuklah kebangkitan luar biasa rakyat Sabah dan Sarawak yang selama ini menjadi 'fixed deposit' BN, faktor jelas ini menguatkan lagi hujah betapa Umno/BN bakal kehilangan kuasa pada PRU-13.
"Situasi inilah yang menggusarkan seorang bekas Perdana Menteri lantas terbitlah kenyataan berbaur ugutan dan cubaan menakutkan pengundi.
"Mungkin Mahathir terlupa maka SAMM ingin mengingatkan bahawa lima kerajaan negeri telah berubah pada Mac 2008 di mana salah satu kerajaan negeri bukan BN telah bertahan sejak 1990. Peralihan kuasa kerajaan negeri ini berlaku dengan aman, tiada kucar-kacir.
"Jika ada pun kucar-kacir, ia hanya berlaku pada malam kemenangan Barisan Rakyat (kini Pakatan Rakyat) di mana staf kerajaan negeri yang tiba-tiba bertugas pada malam tersebut bertungkus lumus melupuskan dokumen 'rahsia' ke dalam mesin shredder.
"Tidak cukup dengan itu, dokumen yang telah terkirai itu dibakar pula bagi menghilangkan 'bukti'. Kejadian seumpama ini mungkin berlaku pada malam pengiraan undi PRU-13 dengan lebih panik kucar-kacirnya di Putrajaya sekiranya BN tumbang", katanya dalam satu kenyataan media hari ini.
"Semua negeri Pakatan Rakyat juga diiktiraf akan ketelusan dalam pentadbiran. Polisi kebajikan yang diamalkan oleh kerajaan negeri PR juga tidak menyebabkan negeri bankrap malah keuntungan berganda dalam banyak sektor hasil dari amalan berjimat dan perbelanjaan berhemah.
"Dalam keadaan kerajaan pusat yang menekan, menyerang dan pengagihan hasil bumi yang tidak adil, kerajaan negeri tetap stabil dan bertahan. Rata-rata rakyat menerima Pakatan Rakyat sebagai peneraju kerajaan negeri dan bersedia untuk giliran menukar kerajaan pusat",katanya.
"Maka di atas kejayaan pentadbiran sepenggal Pakatan Rakyat di beberapa kerajaan negeri, di manakah bahaya dan bahana yang disebut Mahathir? Ataupun sebenarnya ada sesuatu yang amat ditakuti oleh bekas PM ini jika kerajaan pusat berubah tangan?
Dalam blognya, Mahathir juga cuba menyamakan Datuk Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama yang menjanjikan 'perubahan' dalam kempen pilihanraya masing-masing.
Salah satu para kenyataan Mahathir begitu mencuit hati kononnya "tidak ada jaminan pembangkang bila menjadi kerajaan akan membenarkan BN kembali dan pegawai mereka akan mengugut sesiapa yang mahu menukar kerajaan" – seolah-olah Mahathir sedang bercakap di depan cermin, kerana apa yang disebut itu adalah resam regim Umno BN, dan di atas resam sebegini jugalah menjadi faktor penting mengapa rakyat perlu menolak BN dan mengundi 'Asalkan Bukan Umno'.
'Syaitan dan malaikat'
Di para terakhir kenyataan Mahathir begitu mengejutkan dan juga agak menakutkan yang berbunyi "Lebih baik syaitan yang anda kenali dari malaikat yang anda tidak kenal".
Edy berkata, SAMM sebagai anak muda progresif menghadapi sedikit kesukaran mentafsir, namun akhirnya tafsiran paling sesuai untuk kenyataan ini ialah Mahathir menyeru agar lebih baik mengundi "syaitan yang dikenali" dalam BN dari mengundi "Malaikat yang belum pasti" dalam Pakatan Rakyat. Tafsiran yang menyamakan BN dengan syaitan ini tidaklah begitu pelik kerana Mahathir juga pernah menyebut Umno itu busuk hingga ke ususnya.
"Nyata sekali kenyataan Mahathir kononnya bahaya menukar kerajaan pusat adalah umpama ugutan dari ular sawa lumpuh kekenyangan yang dihimpit usia dan tidak perlu ditakuti oleh rakyat yang kian celik membuat perhitungan.
"Rakyat hari ini tidak mudah dipengaruhi sentiment hasutan dan ugutan. Madu di tangan kanan dan racun di tangan kiri, rakyat sudah bijak membuat pilihan antara madu (PR) dan racun (BN)", jelas beliau.
"Akhir sekali SAMM menyeru kepada semua untuk bersama merintis perubahan, kita harus percaya dengan perubahan ini dan tuhan bersama orang yang ingin kepada perubahan (kebaikkan).
"SAMM juga turut mendoakan supaya Mahathir panjang umur untuk menjadi saksi hidup tumbangnya sebuah regim penyambung legasi penjajah," tambah beliau.
Posted: 24 Aug 2012 03:13 AM PDT
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ပြည်သူတို့၏ အခြေအနေနှင့် သုံသပ်ချက် ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ပါရှိသော
(က) နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ သံဃာအချို့နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့ခေါင်းဆောင်၍ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုစိတ်ဓါတ်ကို အလွန်အကျွံမြှင့်တင်ခြင်း၊ လူမျိုးရေးအရ အဆင်ခြင်မဲ့စွာ တိုက်ခိုက်လိုစိတ်ကို လှုံ့ဆော်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံအတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ ရခိုင်အသိုက်အ၀န်းများသို့ပါ ချဉ်းကပ်စည်းရုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
(ခ) နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီမူစလင်များအပေါ် အကြမ်းဖက်ရန်ကိုလည်း အစဉ်မပြတ် ကြံစည်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများအနေဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်ခြင်းမပြု၊ ကာကွယ်ပေးခြင်းမရှိပဲ သယံဇာတများကိုသာ ထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့သည်ဟူသော တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲစေသည့် လှုံ့ဆော်မှုမျိုးတွေ့ရသည်။
(ဃ) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဘင်္ဂါလီများခိုးဝင်မှုကို ထိရောက်စွာတားဆီးခြင်းမရှိ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် အဂတိလိုက်စားသောဝန်ထမ်းများအား အရေးယူခြင်းမရှိကြောင်း အစိုးရအပေါ်စွပ်စွဲမှုအချို့ရှိသည်။
(င) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် မဲအနိုင်ရရှိရေးကိုမျှော်ကိုးလျက် ဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုကာ ဘင်္ဂါလီမူစလင်များအပေါ် မသင့်မလျော်ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း စွပ်စွဲလျက်ရှိသည်။
(စ) ၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေအရ ဘင်္ဂါလီမူစလင်များ နိုင်ငံသားဖြစ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေကိုလည်း နားလည် လက်ခံနိုင်သည့် အခြေအနေမရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
(ဆ) ဘင်္ဂါလီများကိုသာ တစ်ဘက်သက်ကူညီနေသည်ဟု ရှုမြင်ချက်ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် အငြိုးထားကာ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဒေသတွင်မနေရဲအောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာသည်။
(ဇ) ရခိုင်တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့သည် ပဋိပက္ခကြောင့် ရပ်ဆိုင်းနေသည့် ဘင်္ဂါလီများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အချောင်ရယူရန်ကြိုးပမ်းလာကြောင်း တွေ့ရသည်။
(ဈ) ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဘင်္ဂါလီများအားလုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားကြရလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အခွင့်အလမ်းများ ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်။
၁၀။ လူမျိုးစုနှစ်စုအကြား အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးနှင့် သဟဇာတဖြစ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ထွန်းရေးသည်သာလျှင် ယခုအခြေအနေ၏ ထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်စေရေးအတွက် ရခိုင်လူထုအဖွဲ့အစည်းများသို့ အခြေအနေမှန်နားလည်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက အချင်းချင်းထိတွေ့စည်းရုံးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
Posted: 24 Aug 2012 03:03 AM PDT
"Umno khususnya bekas Presidennya (Tun Dr Mahathir Mohamad) yang sudah bersara, tidak pernah mengambil langkah positif membentangkan hudud versi Umno, tempoh 19 tahun, satu huruf pun hudud ala Umno masih belum wujud.
"Jika manusia belajar selama 19 tahun, tetapi sedikitpun tidak mengerti, apa gelaran yang akan diberi? Mengaku sahaja Umno tidak berminat untuk melaksanakan hudud," kata beliau sambil menegaskan "apa yang dibisingkan hari ini hanya sekadar nyanyian politik semata-mata."
"Tangan menuding kepada orang lain, diri sendiri berkudis seribu," kata beliau menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan dari Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM), Kubang Kerian.
"Saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahawa enakmen tersebut telah sempurna tanpa sebarang kecacatan, namun untuk menyatakan bahawa ia digubal sambil lewa amatlah tidak benar sama sekali," katanya.
Saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahawa enakmen tersebut telah sempurna tanpa sebarang kecacatan, namun untuk menyatakan bahawa ia digubal sambil lewa amatlah tidak benar sama sekali. Kerajaan Kelantan telah mengambil inisiatif sebaik mungkin untuk mengumpul pandangan pakar-pakar bagi menjadikan enakmen ini satu kenyataan. Saya sentiasa terbuka untuk menerima sebarang pandangan dan kritikan sekiranya ia mempunyai kelemahan. Datangkanlah alrtenatif dan buatlah pembetulan terhadap kelemahan. Jika ingin dibincang sekalipun, silakan. Para penggubal ada lagi yang masih hidup alhamdulillah, pintu perbincangan masih terbuka. Namun menghantar surat menghalang pelaksanaan hudud bukan merupakan cara seorang muslim! Ia lebih mirip kepada gerak langkah politik jahat yang tidak berminat kepada hukum Allah SWT. Sesuai sangatlah apabila individu ini menulis, "better the devil you know than the angel you don't..."(lebih baik syaitan yang anda kenal daripada malaikat yang anda tidak kenal).
Posted: 24 Aug 2012 01:25 AM PDT
In an interview aired on Sunday, Todd Akin, the newly-christened Republican Senate candidate nominee in Missouri, said that "legitimate rape" rarely causes pregnancy.
Explaining his no-exceptions policy on abortions, Akin was asked if he supported making abortion available to women who have been raped. In response, he saidawoman "has ways" to prevent pregnancy during what he calleda"legitimate rape."
According to Boston CBS, Massachusetts Senator Scott Brown issuedastatement Monday morning calling Akin's comments about women and rape "outrageous , inappropriate and wrong."
"There is no place in our public discourse for this type of offensive thinking. Not only should he apologize, but I believe Rep. Akin's statement was so far out of bounds that he should resign the nomination for US Senate in Missouri," Brown concluded.
Posted: 24 Aug 2012 01:16 AM PDT
Salah satu pertimbangan utama yang diambil KEADILAN semasa mencadangkan penurunan harga kereta adalah kemampuan Proton dan perusahaan automotif tempatan bersaing. KEADILAN mengiktiraf kejayaan Proton dan yakin ia mampu maju jauh ke depan melihatkan keupayaannya bertahan walaupun sudah tidak mendapat perlindungan rebat cukai eksais
bermula tahun 2005.
Sebab itu KEADILAN berpendapat dakyah perkauman yang dimainkan oleh Umno/Barisan Nasional kononnya penurunan harga kereta akan memufliskan Proton sebenarnya menghina tenaga professional di Proton dan perusahaan automotif tempatan lain yang kebanyakannya Melayu/Bumiputra. Jawapan-jawapan pimpinan Umno/Barisan Nasional yang masih menggambarkan seolah-olah Proton dan perusahaan automitif tempatan masih mendapat perlindungan cukai eksais adalah berniat jahat
yang memangsakan Proton demi kepentingan politik Umno/Barisan Nasional.
KEADILAN yakin Proton dan perusahaan automotif tempatan akan mampu berdikari dan bersaing pada harga yang tidak membebankan rakyat. Komitmen KEADILAN adalah mempertahankan peluang pekerjaan dan kebajikan puluhan ribu pekerja di dalam sektor automotif negara, bukannya mengikut karenah bekas pimpinan negara yang mengongkong Proton semata-mata kerana mahu menjaga peninggalan pemerintahan beliau.
Posted: 24 Aug 2012 12:46 AM PDT
Source: http://www.nst.com.my/streets/central/city-hall-to-solve-flood-woes-in-segambut-1.128731(Story by NOEL ACHARIAM AND SHEILA SRI PRIYA, 24/8/2012)
Hassan Kasim, Segambut Bahagia UMNO branch chief: Our village was hit by the worst flood on Wednesday even though it rained less than an hour. The water rose quickly and the villagers could not remove their valuables to higher ground. Residents' cars were stuck in the floods and their belongings were damaged. However we are glad that the Kuala Lumpurmayor decided to turun padangdespite his day off to listen to our grievances.
Azahri Kassim, 48: I have been living in Kampung Segambut Bahagia Villagefor the past 20 years. I believe there are plans to build two retention ponds here. However, the floods can be avoided ifathird retention pond is built on the higher grounds at Mont Kiara. The water flowing here from the more developed areas on higher ground is the cause of the floods. Our village is located on low land which was on former tin mine area. We received 300 bags of rice from Segambut Member of Parliament, Lim Lip Eng, and we are grateful for the contribution.
Posted: 23 Aug 2012 11:51 PM PDT
BBC ONLINE 20 August 2012
vegetative state would want to be revived, due to his Muslim faith, if
his condition deteriorated, his family has argued in court.
Posted: 24 Aug 2012 01:32 AM PDT
Posted: 23 Aug 2012 10:07 PM PDT